Ndị nwere ọgụgụ isi & Bara nnukwu uru – Dakọtara 3 Ndị aghụghọ egwuregwu&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Ndị ohi ezurula ihe ịchọ mma dị na Obí na enwere naanị otu onye nwere ike iweghachite ha!
Soro Jenni Genie na onye ya na ya na -eme njem gaa ụwa ihe omimi, Trix the Fox, ịzọpịa ndị ohi zuuru akụ nke Obí. Gbanwee, egwuregwu, na -etipịakwa ihe bara nnukwu uru, naputa ihe mgbe ochie, na-anakọta ogwe ọla edo na igodo nwere mmasị na nyocha a nwere ọmarịcha ụdị!
Na ọtụtụ puku ọkwa na ụdị egwuregwu siri ike, na ihe omume kwa ụbọchị, Ndị nwere ọgụgụ isi & Bara nnukwu uru na -enye awa na -adịghị agwụ agwụ nke egwuregwu na -akpali akpali 3 egwuregwu mgbagwoju anya:
-Gbanwee, egwuregwu, ma gwepịa ihe bara nnukwu uru n'ọtụtụ puku ihe ọchị na ihe ịma aka egwuregwu-3 egwuregwu mgbagwoju anya
-Collect keys to mepee new worlds and crush challenges!
-Jiri ike na-atọ ụtọ dị ka Rainbow Gilded ma ọ bụ nru ububa iji gafere n'ọkwa siri ike!
-Kpughee arụsị ma nakọta ọla edo n'ụzọ!
-Kpọọ ihe omume ọhụrụ na -atọ ụtọ na egwuregwu siri ike 3 ihe mgbagwoju anya kwa ụbọchị!
-Streaks na -arị elu: Nweta ihe nrite maka idozi egwuregwu mgbagwoju anya na -enweghị ndụ
-Bandit Rush: Enwetaghị ndị ohi n'ebe dị iche iche na njem gị iji nweta ndị na -akwalite ihe
Budata Genies & Bara nnukwu uru na -amalite gị kpokọtara njem taa!
Na -ahụ Genies n'anya & Bara nnukwu uru? Dị ka anyị na Facebook iji nweta akụkọ kachasị ọhụrụ na ọkwa ọhụrụ, ọdịnaya na atụmatụ. https://www.facebook.com/GeniesandGems/
Soro anyị na Instagram: @ogene_igbo
JENESIS NA GEMS, akara GENIES NA GEMS, ihe ngosi egwurugwu egwurugwu, mkpụrụedemede GENIES NA GEMS, na indicia ndị ọzọ edebara aha na/ma ọ bụ ụghalaahịa edenyeghị aha na nwebiisinka nke Jam City, Inc. na enweghị ike iji ya na -enweghị ikike. Mmmmmmmmmm 2020, Ụlọ ọrụ Jam City Inc.. Ikike niile echekwabara.
← Mkpụrụ obi ọjọọ: Ndị aghụghọ RPG vlanahụ gbara ọchịchịrị&Mbanye anataghị ikike Ọsọ ịgba egwu – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike →